रिल र रियलमा फरक छ - यात्रा सन्दर्भ - साप्ताहिक
आस्मा डिसी, नायिका
आस्मा भिजे कि नायिका ?
पहिले मात्र भिजे, अहिले भिजे प्लस नायिका । मलाई नायिकाभन्दा पनि अभिनेत्रीका रूपमा चिनिन मन लाग्छ ।
चलचित्रमा कसरी आइयो ?
म टिभी फिल्मीमा देखिन थालेपछि चलचित्रका थुप्रै प्रस्ताव आए, मैले मानिरहेकी थिइनँ । निर्मात्री कृषा चौलागाईंले सुनाएको एउटा स्क्रिप्ट यति धेरै राम्रो थियो कि नाइँ भन्न सकिनँ, विडम्बना उक्त चलचित्र निर्माण नै भएन ।
चलचित्र नै नबनेपछि नायिकाचाहिँ कसरी बनियो त ?
निर्देशन तथा सम्पादक सुरेन्द्र पौडेलले आभासको स्क्रिप्ट सुनाएपछि मैले आफूलाई त्यो भूमिकामा देखेँ, अनि उक्त चलचित्रमा काम गरियो ।
टेलिभिजनकर्मी पनि अनायसै बन्नुभएको थियो क्यार ?
फुर्सदका बेला प्रशिक्षण लिइरहनुपर्‍यो भनेर लागेकी थिएँ, पछि मलाई यसमै लगाव बढ्यो । काम गर्दै गएपछि मात्र अनुभूति भयो कि आइ लाइक इट ।
कतिवटा चलचित्रमा नायिका हुनुभयो ?
नाइँ नभन्नु ल–३ पनि जोड्ने हो भने तीनवटा पुग्यो ।
ती तीनवटामा रेखा थापाको रामप्यारी पनि पर्छ ?
हो, पर्छ ।
रेखाका चलचित्रमा अरू नायिका हुँदैनथे, तपाईं नै पहिलो नायिका हुनुभयो हैन ?
वास्तवमा रेखा थापालाई अरू नायिका त के नायक पनि चाहिँदैन । उहाँ एक्लै आफ्नो काँधमा बोकेर चलचित्र चलाउन सक्षम हुनुहुन्छ । म पहिलो पटक उहाँले निर्माण गरेको चलचित्रकी अर्की नायिका भएर काम गर्न पाएकोमा आफूलाई भाग्यमानी मान्छु ।
कसरी हुनुभयो रामप्यारीमा नायिका ?
आभास रिलिज भएको एक हप्ता भएको थियो । निर्देशक सबिर श्रेष्ठ टिभी फिल्मीको कार्यालयमा आएर रेखा थापाकी बहिनीको भूमिकाका लागि अफर गर्नुभयो ।
दुईवटा चलचित्र संयम पुरीसँग काम गरेपछि तेस्रोमा उनीसँग काम नगर्दा कस्तो भयो ?
संयमसंग काम गर्न सहज भए पनि मलाई कुनै पनि नयाँ काम गर्दा के होला भन्ने डर लागिरहन्छ । सबिर श्रेष्ठले मलाई निकै सजिलो तरिकाबाट सिकाउनुभयो । उहाँलाई कलाकारबाट काम निकाल्न आउँदो रहेछ ।
संयमसँग प्रेम गर्ने अनि रामप्यारीमा अर्को नायकसँग अभिनय गर्दा असहज लागेन ?
यही त हो नि रिल लाइफ र रियल लाइफ भनेको ।
अब विवाह भोज कहिले ख्वाउने ?
अहिले त म सानै छु । पढाइ पनि बाँकी नै छ । काम पनि धेरै गर्नु छ । महत्वपूर्ण कुरा त यो क्षेत्रमा स्थापित हुनु छ ।
संयमसँग प्रेम गर्दाचाहिँ सानै छु जस्तो लागेको थिएन ?
प्रेममा पर्नु र विवाह गर्नु फरक कुरा हुन् ।
संयम बाहेक ह्यान्डसम लाग्ने तीन नायक ?
संयम त छुटाउनै मिल्दैन । अरू दुई जनाचाहिँ आर्यन सिग्देल र अनुपविक्रम शाही ।
फरक विधाका महिला